William Hague oo kulan la qaatay jaaliyadda Somalida K/Afrika | Building Momentum
William Hague oo kulan la qaatay jaaliyadda Somalida K/Afrika
Posted on February 15, 2012 by somaliamomentum
Wasiirka arimaha dibadda ee dalka Ingiriiska William Hague ayaa la kulmay jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Capetown ee Koonfur Afrika,waxaana uu kala hadlay aragtida jaaliyadda ee ku aadan shirka dowladda Britin ay marti gelineyso ee lagu wado inuu dhawaan ka furmo magaalada London.
Wasiirka ayaa jaaliyadda Soomaalida u sheegay inay muhiim tahay inay ka hadlaan wixii xal u keeni kara arimaha Soomaaliya iyo weliba aragtidooda ku aadan shirka magaalada London ka furmaya dabayaaqada bishan.
Mr. William Hague ayaa sidoo kale kulanka kaga hadlay maamul goboleedyada ka jira dalka sida Puntland, Somaliland iyo Galmudug,wuxuuna sheegay inuu ku furaxsan yahay horumarka mamulladaasi,isagoona sheegay in sidoo kale uu rajeynayo in Koonfurta ay ku dayato.
“Arinta waa arin siyaasadeed qofkastana quseeysa Al-qaacidda ayaa waxa ay isticmaaleysaa magaca Soomaaliyeed, anagana waxaan diyaar u nahay in aan dowladda ka caawino dhinaca amaanka, taageera buuxdana waan la garab istaageynaa” ,ayuu yiri wasiirka arimaha dibadda ee dalka Ingiriiska William Hague oo la hadlayey saxaafadda.
Madaxa xiriiriika arimaha dibadda ee jaaliyadda Soomaaliyeed (SASA) Xadiis Xaaji Aadan oo ka mid ahaa Soomaalidi ka qayb gashay kulanka ayaa sheegay in aragtidooda ku aadan shirka London ay uga warrameen wasiirka,wuxuuna xusay inay soo dhoweynayaan.
Kulanka wasiirka arimaha dibadda ee dalka Ingiriiska William Hague ayaa ku soo beegmaya xilli maalinti shalay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Britin uu la kulmay qaar ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika,kaasoo jaaliyadda weydiinayey fikirkooda ku aadan shirka Ingiriiska ay marti gelineyso.